Tebụl na-amụba ▷ Discover Online ▷ ➡️
TNa-ekwu maka ịba ụba. Ị nwere ike ịmụta mfe karịa ka ị na-eche. Ihe niile bụ ihe ịmara ha, ikwughachi ha na iburu ha n'isi ma ha ga-anọnyere gị ruo oge ndụ gị niile. Gaa maka ya!
Njehie: ele nwere ike ọ gaghị adị d0241853ho
La Mbadamba ọtụtụ ọ bụ ihe ị ga-eji ọtụtụ oge na ndụ gị niile. Gaghị echefu ma ọ bụrụ na ị mụta ihe site na nwata. Ọ bụrụ na anyị na-emegharị tebụl ọ bụla mgbe niile, n'ime awa ole na ole ị ga-enwe ike ịchọpụta na ị marala nọmba niile ịba ụba.
Na-amụ tebụl? Anyị na-akwado isiokwu anyị: esi mụọ tebụl ịba ụba. Cheta na tebụl ntinye site na 1 ruo 10 ha dị mkpa na mgbakọ na mwepụ. Ọ bụrụ n ’ịchịzighị ha ọsọ ọsọ, ị ga - enwe nsogbu n’ọdịniihu mgbe ị na - eme nchịkọta. Ma atụla ụjọ! Anyị na-emesi gị obi ike na ọ dị mfe karịa ka ị chere. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụ ihe na-atọ ụtọ na ị ghọtara na 3 x 4 bụ 12. Nke a pụtara na 3 na-eme ugboro 4 ugboro ugboro, anyị nwekwara ike ịsị na 4 na-eme ugboro anọ 3, ọ bụ otu.
Ọ bụ ezie na ọ na-atọ ụtọ ghọta ka imụba si arụ ọrụNa ndụ gị, ọ ga-abụ ebe nchekwa gị nke ga-ekwughachi nsonaazụ nke mmụba ọ bụla n'otu ntabi anya.
1 Ntọala ntanye site na 1 ruo 10
2 Gịnị bụ tebụl ịba ụba?
2.1 Uru ndị dị a tableaa ka tebụl ịba ụba wetara?
3 Kedu otu esi amuta tebụl ịba ụba?
4 Isiokwu 1
5 Isiokwu 2
6 Isiokwu 3
7 Isiokwu 4
8 Isiokwu 5
9 Isiokwu 6
10 Isiokwu 7
11 Isiokwu 8
12 Isiokwu 9
13 Isiokwu 10
Ntọala ntanye site na 1 ruo 10
na tebụl ịba ụba dị mkpa, na ndụ anyị niile, anyị ga-ahụ ọnọdụ ebe anyi aghaghi ima ma mara ha na oké udo. Ọnọdụ kachasị ebe anyị nwere ike ịchọta ha nwere ike ịbụ:
• Inwe ịzụta tiketi 10 maka ihe omume maka ezinụlọ gị dum na ịchọrọ ịmara ọnụahịa niile ngwa ngwa. Otu ihe ga - eme bụ itinye ntinye niile n'otu n'otu, ọzọ ga - abụ iji la 1 okpokoro0 nke ahụ ga-enye anyị azịza ya ozugbo.
• Ọnọdụ ọzọ nwere ike ịbụ ịmara peturuolu ole ka anyi ga-acho iru ebe, ma oburu na anyi mara ihe ugbo ala anyi n’iru na kilomita ise. Na nke a anyị nwere ike iji la 5 okpokoro dị ka nhọrọ kacha mma.
• saber ihe ole dị na ọtụtụ igbe ma ọ bụrụ na anyị maara otú ọtụtụ nkeji dị na onye ọ bụla n'ime ha.
• Mara ego zuru oke nke ihe ma ọ bụrụ na anyị mara ego ole bara uru.
• Mara ihe ugwo iri na abuo ma oburu na anyi mara ihe otu n’ime ha bara.
• Ọ bụrụ n’inwere ụlọ ọrụ ma nwee ndị ọrụ 2000 ebe mmadụ niile ga-anata otu ụgwọ ọnwa, mgbe ahụ, mmụba dị mfe nwere ike inyere gị aka ịmata ego ole ị kwesịrị ịkwụ ndị ọrụ gị niile na ụlọ ọrụ gị. Ha bụ ọrụ nkịtị.
Maka ihe a niile na ndị ọzọ ọ dị mkpa ịmata nke ọma tebụl ọtụtụỌzọkwa, ọ dị mma ịmata uru dị n'ịmụ okpokoro ịba ụba. Dị ka anyị pụrụ ịhụ, ọnọdụ ebe anyị na-aga chọrọ a multiplication table bụ nnọọ nkịtị na-iche iche, na ọ bụ ya mere ijikwa ha na ịmata ha nke ọma bụ ihe dịịrị anyị mkpa na ndụ anyị.
Gịnị bụ tebụl ịba ụba?
Ndị mepụtara nke tebụl ọtụtụ a na-ekwu na ọ bụ ọkà ihe ọmụma na mgbakọ na mwepụ Pythagoras. N’ịbụ onye nwere ọgụgụ isi buru ibu, ọ bịara jiri anya nke uche ya hụ usoro ihe omume mgbakọ na mwepụ ndị a, ọ bụ ezie na ọ bụ mgbe e mesịrị ụlọ akwụkwọ Pythagorean mezuru ha.
Tebụl na-amụba bụ ezigbo mgbanwe n'oge ha, ebe ọ bụ na ekele ha nwere ike ịrụ ọrụ mgbakọ na mwepụ na-enweghị mkpa itinye ọtụtụ ọnụ ọgụgụ ọtụtụ oge.
Ruo ọtụtụ afọ, a na-echepụta ụdị tebụl na usoro dị iche iche, ụfọdụ tebụl bụ ọnụ ọgụgụ 3 site na 0 ruo 999, mana ha enweghị ihe ịga nke tebụl ndị bụ isi 0 ruo 10.
Na 1642 Blaise Pascal mepụtara ihe mgbako akpaka nke bụ rubric maka arụmọrụ mgbakọ na mwepụ a.
Tebụl nke mbuba, nwere tebụl Cartesian (ma ọ bụ Tebụl Pythagorean ) nke gụnyere isonye igbe nke ọ bụla na nke ọzọ.
Uru ndị dị a tableaa ka tebụl ịba ụba wetara?
• Ndị ahịa nwere ike ịre ngwa ngwa na ire ngwa ngwa.
• Ndị na-ahụ maka akụnụba na ndị ọnaụtụ n'oge ahụ nwere ike ịrụ nnukwu ọrụ n'ime obere oge.
• Ndị bi na ya nwere ike ịrụ ọrụ mgbagwoju anya karịa nke were ogologo oge na mbụ.
Dị ka anyị pụrụ ịhụ, mgbakọ na mwepụ na kpọmkwem tebụl ọtụtụ, na mbido ha amalitela imepụta nke mbụ ha na-abara ọha mmadụ uru. N’oge ahụ, inwe ụdị ngwa ọrụ bara uru dịka ezigbo onyinye nke sayensị wetaara ha. Taa, ọ ga-abụ ihe a na-apụghị ichetụ n'echiche inwe ike ibi na-enweghị tebụl ịba ụba, ebe ọ bụ na a na-arụ ọtụtụ nde arụmọrụ kwa ụbọchị ebe tebụl ndị a dị mkpa.
Kedu otu esi amuta tebụl ịba ụba?
I gha amata ha niile n'ime 1 awa!. Ọ bụrụ na ị na-eche esi mụọ tebụl ịba ụba, anyị nwere ozi ọma, ọ bụ nnọọ mfe na a aghụghọ ! Hasbụrụ nwere ụdị ncheta abụọ: obere na ogologo oge, ugha a gha enyere gi aka imuta ha ngwa ngwa ma gha adigide rue mgbe ebighi ebi. Anyị ga-eso usoro ndị a ga-eme ka tebụl dị mfe.
• Nzọụkwụ mbụ. Ka anyị were dịka ọmụmaatụ Ugboro asaa. Anyị ga-agụkwa ya otu ugboro. Echegbula ma ọ bụrụ na ị naghị eburu ya niile n'isi, na mbụ nke a bụ ihe nkịtị, ka anyị gụọ ya.
• Nke abụọ. Anyị ga-eji mpempe akwụkwọ kpuchie azịza niile, na-enweghị mkpuchi ọtụtụ, anyị na-ekpuchi azịza dịka nke a:
• Nzọụkwụ nke atọ. Anyị ga-amalite na mbido ma anyị ga-anwa ịmara ole 7 × 1 dị, anyị na-ekwu nsonaazụ ahụ n'olu dara ụda ma wedata akwụkwọ ahụ iji lelee ya, ọ bụrụ na ị nwetara ya nke ọma, gaa n'ihu na ntinye 7 next 2 na-esote, ọ bụrụ na ị daa, ị ga-ekpuchi niile ngwọta na-alaghachi na-amalite.
• Nzọụkwụ nke anọ. Ọ bụrụ na ịpịrị 7 × 2, wee gaa n'ihu na-agbadata akwụkwọ akụkọ ahụ n'otu n'otu ruo ọgwụgwụ, ọ bụrụ na ị na-atụ uche, ị ga-ekpuchirịrị ha niile wee bido na mbido. Ya mere, na tebụl niile.
Usoro a na - eji ncheta gị eme ka uche gị dịkwuo elu. N’ụzọ dị otu a, ụbụrụ gị ga-eme ike ya niile ịmara tebụl ịba ụba ka ọ ghara ịmalite na mbido na tebụl ọ bụla. Ọ bụ ya mere usoro ihe a ji bụrụ otu n'ime usoro nke anyị weere na ọ kachasị dị irè. N'otu oge anyị ga-emeghachi tebụl ugboro ugboro, yabụ ọmụmụ ihe ga-ezu oke.
Ncheta ogologo oge bụ otu n'ime ihe kachasị dị irè. Ihe mgbatị ahụ a na-emepụta bụ na ụbụrụ gị na-ege ntị nke ọma, n'ihi na ọ maara na ọ bụrụ na ị daa, ị ga-alaghachi na mbido ọzọ. Ihe ị ga - eme na tebụl 10 ịba ụba, na ịmeghachi usoro ugboro ugboro Anyị na-ekwe nkwa na n'ime awa 1 ị ga-ama ihe niile!
Nkọwa na-akpali mmasị banyere tebụl ọtụtụ :
• Tebụl na-amụba bụ arụmọrụ mgbakọ na mwepụ nke gụnyere itinye nọmba ọtụtụ oge, dịka ọmụmaatụ 7 × 3 = 21 (nke a pụtara 7 + 7 + 7 = 21). Ha bụ arụmọrụ dị mfe mana n'otu oge ahụ ha dị ezigbo mkpa maka ndụ, ebe ọ bụ na ị ga-eji ha ọtụtụ.
• Mkpa ọ dị ịmara tebụl ịba ụba bụ ihe dị mkpa, ụfọdụ ihe atụ eji ga - abụ: ọ bụrụ na lemon bara uru 5 dollar ma azụrụ m lemọn 4, kedụ ego niile ga-efu m? Site na mgbakọ na mwepụ na-arụ ọrụ 5 x 4 = 20, anyị maara na lemons 5 x x 4 bụ dollar 20. Ga-arụ ọrụ mgbakọ na mwepụ a ọtụtụ puku ugboro n'oge ndụ gị niile.
• Anyị ga-emerịrị ha nke ọma. Ọ dị mkpa ịmara ha nke ọma iji nwee ike ịnwe ihe ngwọta nke ịba ụba ọ bụla n'otu ntabi anya, nke a ga-enye anyị ohere ịchekwa oge dị ukwuu na ngụkọta metụtara.
• Enwere ọtụtụ aghụghọ ịmara tebụl ịba ụba, anyị na-akwado isiokwu ahụ esi mụọ tebụl ịba ụba, ma anyị na-akọwakwa ụfọdụ nkọwa, dịka ọmụmaatụ: ọ bụrụ na anyị amata ole 3 × 4 = 12 dị, anyị ga-amarakwa etu 4 × 3 = 12 dị, cheta na iwu ahụ emetụtaghị azịza ya, n'ụzọ a 7 × 3 = 21 na 3 7 = 21. Nke a aghụghọ ga-enyere gị aka iji ya na ọtụtụ arụmọrụ.
• Zọ kachasị mma ma dị irè iji mụta tebụl ịba ụba, mejupụtara ịmeghachi tebụl ọ bụla ugboro ugboro, nke a ga - eme ka ị cheta ha ngwa ngwa na maka ndụ.
Ugbu a ị matara tebụl, oge eruola Mụta ha maka ndụ, na weebụsaịtị a anyị na-enye gị usoro ncheta nke ga - enyere gị aka ịghara ichezọ ha ma nwee nzaghachi ngwa ngwa oge ọ bụla ịchọrọ ha.
Recuerda que anọgidesi bụ isi ihe na-aga nke ọma, ọ bụ ezie na ha nwere ike iyi ihe siri ike, tebụl ịba ụba na-achọ obere oge iji mụta ruo mgbe ebighi ebi, ọ bụ naanị ikwughachi na ikwugharị nke ọ bụla n'ime ha, anyị ji n'aka na n'otu ehihie, ị ga-enwe ike ị nweta ebumnuche nke idebe ha na ncheta gị n'oge ndụ gị niile.